ဝါးခယ်မ : နာမည်ကျော် စက်သေနတ် ၊ နောက်ပွင့်ရိုင်ဖယ် ၊ လောင်ချာ ၊ စိန်ပြောင်း အချို.
နာမည်ကျော် စက်သေနတ် ၊ နောက်ပွင့်ရိုင်ဖယ် ၊ လောင်ချာ ၊ စိန်ပြောင်း အချို.
Posted by ဇာမဏီ at 10:57 AM